iPhone 7 Iyo Wararka Xanta da'ayo ah
iPhone 6s (Plus) Iyo Wararka Xanta da'ayo ayaa
Wararka xanta ah oo lagu faah faahinayo qorshaha lagu sameeyo Apple u iPhone cusub oo sanadkan ee ay horeba u socdeen iyo qaadaan qof walba ee dareenka. 6s iPhone The (Plus) durbaba waa mawduuc trending ah, iyadoo aan loo eegin xaqiiqada ah in iPhone 6 iyo iPhone 6 Plus ayaa ka soo jirtay dhowr bilood oo keliya ka hor. Waxaad la yaabi xaddiga wararka iyo warar xan ah oo la wareegi agagaarka iPhone 6s (Plus). Halkan waxa ku jira ugu sareysa 5 wararka xanta ah in samaynta 6s iPhone (Plus) mowduuca ugu weyn ee ka qoreen suuqa ka mid ah dadka waayadan dambe:
Waxa ay noqon doontaa iPhone 7 ama iPhone 6S?
Haddii taariikhda laftiisa soo celin iyo Apple daamankayguu heshiisyada ay magaca dhaqanka, iPhone soo socota waxaa loogu yeedhi lahaa iPhone 6S ama iPhone 6C halkii iPhone 7. Si kastaba ha ahaatee, labada casriga ah ee ugu danbeysay ee taxanahan iPhone lahayn ee alifbeetada in magacyadooda iyo si fudud ayaa loo yaqaan iPhone 6 iyo iPhone 6 Plus. Sidaas, eray suuqa sidoo kale waa in Apple iska ilaawaan laga yaabaa alifbeetada wadajir iyo gig soo socota waxaa loogu yeedhi lahaa iPhone 6s (Plus).
Oo ah falanqeeye KGI Securities Ming-Chi Kuo, caan ku ah warbixinta qorshayaasha soo socda ee Apple ayaa, sheegay in isbedel la sameeyo ee casriga ah ee soo socota ay Apple noqon doonaa muhiim ah oo ku filan shirkadda in ay u wac iPhone 7 halkii iPhone 6S.
Warka belefta ah oo kale in la bilaabay oo ay Addomahaaga Apple isha waa in iPhone 6s (Plus) waxaa loogu yeedhi lahaa iPhone Air, ka dib markii raad ee MacBook Air. Source halkan .
6s iPhone (Plus): Release Date
Haddii Apple sii ay arrimuhu ee la yaableh adduunka ee September, waxay u badan tahay in iPhone cusub loo soo bandhigi doonaa in September, 2015. iPhone 6 iyo iPhone 6 Plus ayaa bilaabay on September 19, 2014 halka iPhone 5C iyo iPhone 5S ayaa soo bandhigay on September 10, 2013. Haddii Apple soo socota isla calaamadaas, iPhone 6s (Plus) waa in la bilaabay in xilliga dayrta ee 2015.
Website kale casriga ah ayaa sheegay in waxa ay leedahay il in sahaydu in sheegayaa in halka iPhone 6s (Plus) ay tahay inay sugaan ilaa September, iPhone 6S laga bilaabi doonaa gu'ga sannadkan ka garab Apple ay daawadaan. 'The Source' website-ka ayaa sidoo kale sheegtay in tan iyo markii Apple waa laba labeyn in aan bilowno ay iWatch hore aan casriga ah ee la socda, waxa lagu daahfuri doonaa 6S iPhone la gaadhka guga ee sanadkan ku xiga iPhone 6s (Plus) ee September.
Dumarow, bal erayga kale ee hawada waa in iPhone 6S laga bilaabi lahaa bishii September ee sanadkan iyo iPhone 6s (Plus) la soo bandhigay lahaa guga ee 2016. Source halkan .
iPhone 6s (Plus): Size shaashadda
Waxaa jiray tiro ka mid ah sheekooyinka ku tartamaya ku saabsan size screen ah iPhone soo socda ee. Apple oo hadda iibisa casriga ah ee saddex tirada screen kala duwan: 4-inch iPhone 5S, iPhone 4.7-inji ah 6 iyo 5.5-inji iPhone 6 Plus. Ogaanshaha siyaasadda ee shirkadda ilaalinta classic arrimuhu laakiin hormartay, waxay u dhowdahay in ay ku siin doonaan casriga ah ay screen 4-inch. Sidaa darteed, waxaa la saadaaliyay in si loo ilaaliyo ee kala duwan iyo fasalka, Apple daahfuri lahaa saddex casriga cusub sannadka soo socda ama si. Kuwaas waxaa la magacaabay lahaa iPhone 6S, iPhone 6C iyo iPhone 7.
Si kastaba ha ahaatee website kale uu leeyahay xagal kala duwan ee aragtida ah size screen oo ka mid ah iPhone 6s soo socda (Plus) ah. Waxay sheegtay in gar qaybinaya ka sii daynta ee la soo dhaafay, iPhone 6s (Plus) waa in ay leeyihiin shaashad 4.7-inji oo iPhone 6s (Plus) laga bilaabi lahaa 5.5-inji screen size. here Source .
iPhone 6s (Plus) sooc: Display
Waxaa jira aragtiyo badan oo xiiso leh horey by falanqeeyayaasha iyo ilo ku saabsan feature bandhigay ah iPhone soo socda ee.
The Daily News dhaqaalaha ayaa sheegay in sahaydu Apple ee lamaanahaaga TPK ayaa ka shaqaynaysa mashruuc la yidhaahdo 'screen 3D qaawan-isha'. Habkaani marka lagu daro in iPhone cusub waxa ay awood u lahaa in uu kasoo muuqdo bandhigay 3D.
Oo ah falanqeeye ayaa Ming-Chi Kuo sheegtay in iPhone jiilka xiga oo ay yeelan doonto shidma xoog-taabashada capacitive. In note ay soo saartay in ay maal-ka by falanqeeye ka, waxaa lagu sheegay, in iPhone ee Force Touch shidma ma ogaan cadaadis ah in laga codsadaa in ay si toos ah ay faraha. Qorshahaa waxa ka mid ah dhismaha ah shidma Force Touch in lagu dabaqo lahaa ku 6s iPhone cusub (Plus) ku lug lahaa faragelinta ay hoos u signal ka guddi In unug la taabto. Tani waxay awood u lahaa shidma si loo ogaado qadarka cadaadis in laga codsadaa screen. Ku Source halkan .
iPhone 6s (Plus): camera ayaa
Waxaa lagu xamanayaa in iPhone 6s (Plus) 's camera noqon lahaa horumarinta muhiim ah in ka badan camera laga helay iPhone 6 iyo iPhone 6 Plus.
John Gruber sheegay in podcast ah uu blog in il ku habboon ayaa shaaca ka qaaday in 6s iPhone cusub (Plus) 's camera yeelan doonaan nidaamka laba-gelis in uu u suurtogelin doonaa dadka isticmaala si ay u qabsadaan tayo DSLR images. Source halkan .
Waxba ma ahan wixii wararka xanta ah ee la yidhaahdo ama waxa technology geeks casriga ah ka hadlo, runta weli waa in ay soo bandhigaan. Marka laga male, hal sheey aan hubo - sida had iyo jeer - in iPhone cusub - wax kasta oo waxaa jidka loo bixin lahaa - hubaal lahaa qaar ka mid ah muuqaalada xiiso leh in jirrabaysaan lahaa ee macruufka caashaqi jiray in ay u baddashaan casriga cusub ee Apple.
iPhone Camera Dhibaatooyinka iyo Solutions
> Resource > iPhone > 6s iPhone (Plus) Iyo Wararka Xanta da'ayo ah